Multi-inoshanda obstetric mubhedha B-45
B-45 Multi-inoshanda obstetric mubhedha Kukura: 1800 (L) × 600 (W) × 650/895 (H) mm Multi-chinangwa obstetric tafura yakagadzirirwa kuendesa, kubvisa nhumbu uye gynecological bvunzo. Iyo inoratidzirwa nekushanda kuri nyore, hupfumi, kuchengetedza uye kuvimbika. Iyo inoumbwa yemubhedha pamusoro, pamubhedha uye pachigadziko chemubhedha. Iyo yemubhedha pasi inosanganisira kumashure chikamu, chigaro chikamu uye gumbo chikamu. Iko kumusoro-pasi kwekufamba kweashure chikamu uye mberi uye kumashure kutenderera kwemubhedha kunodzorwa neanoshanda ruoko vhiri, rinoita ...
Epoxy kuvharidzira obstetric mubhedha B-43-1
Kukura: 1680mm (L) * 620mm (W) * 800mm (H) Mhando huru: 1. epoxy yakafukidzwa furemu, yakakwirira mhando polyurethane mattress; 2.Tree zvikamu, kudzorera kumashure (yakagadziridzwa negesi chitubu), ibvi kuzorora basa (rinodzorwa negetsi mechanic system); 3. Yechipiri gumbo rinotsigira chishandiso, iine imwechete ndiro dzeS SS pasi petafura 4. Yakagadzirirwa tsoka, tsoka tsoka dzakadzivirira ruzha 5. Freight kuponesa kugogodza-pasi kuvaka.
Stainless simbi obstetric mubhedha B-42-1
saizi: 1680mm (L) * 600mm (W) * 800mm (H) Chikamu chikuru: 1. isina simbi simbi, yakakwirira mhando polyurethane mattress; 2. Zvikamu zvitatu, zororo rekushure (rakagadziriswa gasi chitubu), ibvi kuzorora basa (rinodzorwa negehena mechanic system); 3. Yechipiri gumbo rinotsigira chishandiso, iine imwechete ndiro dzeS SS pasi petafura 4. Yakagadzirirwa tsoka, tsoka tsoka dzakadzivirira ruzha 5. Freight kuponesa kugogodza-pasi kuvaka.
B-48 C1-Standard Configurations ○ ABS musoro bhodhi (1) ○ ABS mativi njanji ine kunyorovesa (2) ○ Motors (3) ○ Makumbo anotsigira (2) ○ Labour grips (2) ○ IV Pole magaro (2) ○ Luxury pakati kuvhara vharairi (4)
B-48A1 Kamuri yeLDR kamuri imwechete yekushanda, kuendesa, kupora, uye yekumashure (LDRP). Midziyo yemubhedha iyi inokodzera nzira dzese dzekuzvarwa uye dzekuzvitakura kunze kwechikamu cheesesita uye general anesthesia kujifambisa. Dzimba dzese dzekutakura dzakagadzirirwa nzira yekuzvitakura kubva pakuzvarwa kusvika kumwedzi nekutarisira kwekuzvitakura, uye inokwanisa kubata matambudziko mazhinji. LDR mubhedha, seyakakosha machira mukamuri imwe inogona kunyatso nyatsogadziriswa kuti igadzirise predelivery uye dzakasiyana yekuzvitakura positio ...